Ulwazi Lweziyobisi | Eyenkanga 2021
Iziyobisi Vs. Umhlobo Uluntu, Inkampani Iindaba, Impilo Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Imfundo Yezempilo, Impilo Ulwazi Lweziyobisi Imfundo Yezempilo Uluntu, Impilo Impilo Inkampani, Ukuphuma Ukuphuma Ekuhlaleni Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Inkampani Iindaba
I-ACE inhibitors vs i-beta blockers: Loluphi unyango lwexinzelelo lwegazi olukufaneleyo?
Ingaba unalo ifuthe eliphezulu? Thelekisa ukusetyenziswa, iziphumo ebezingalindelekanga, izilumkiso, kunye nokunxibelelana kwee-ACE inhibitors kwi-beta blockers.
Uluhlu lwee-ACE inhibitors: Ukusetyenziswa, iimveliso eziqhelekileyo kunye nolwazi ngokhuseleko
I-ACE inhibitors ludidi lwamayeza olwehlisa uxinzelelo lwegazi ngokuphumla kwemithambo kunye nemithambo. Funda ngakumbi malunga nokusetyenziswa kwe-ACE inhibitors kunye nokhuseleko apha.
Adderall dosage, iifom, kunye namandla
Imilinganiselo esemgangathweni ye-Adderall ye-ADHD yi-5-40 mg. Sebenzisa itshathi yethu yedosi yeAdderall ukufumana iidosi ezicetyiswayo zeAdderall yeADHD kunye narcolepsy.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeAdderall kunye nendlela yokuzikhusela
Ukunciphisa ukutya, umlomo owomileyo, kunye nengxaki yokulala ziziphumo ebezingalindelekanga eziqhelekileyo zeAdderall. Funda ukuba zide kangakanani iziphumo zeAdderall kwaye ungazithintela njani.
Yimalini iAdderall ngaphandle kweinshurensi?
Ngaba unayo i-ADHD kodwa awunayo i-inshurensi yezempilo? Phantse iidola ezisi-8 kwithebhulethi nganye, i-Adderall iyabiza. Funda ngendlela yokufumana kunye nokugcina imali kwiAdderall ngaphandle kweinshurensi.
Ngaba abantwana bakho kufuneka bathathe ikhefu lasehlotyeni kumayeza e-ADHD?
Izinto ezikhuthazayo zinceda abantwana abagxile kwi-ADHD esikolweni-abanye abazali bajonga iholide yehlobo yeziyobisi. Sibuza iingcali ukuba ngaba ikhefu lonyango licebo elilungileyo na.
Adderall XR idosi, iifom, kunye namandla
Imilinganiselo esemgangathweni ye-Adderall XR ye-ADHD yi-20-60 mg ithathwa yonke imihla. Sebenzisa itshathi yethu yedosi yeAdderall XR ukufumana iidosi ezicetyiswayo zeAdderall XR.
Izibonelelo zamayeza e-ADHD kulutsha
Funda malunga nezinto ezikhuthazayo (iRitalin, iAdderall) kunye neyeza ezingezizo ezikhuthazayo (iStrattera) amayeza e-ADHD ukulinganisa izibonelelo ngokuchasene nemingcipheko ye-ADHD enganyangekiyo kulutsha.
Ngaba kukhuselekile ukudibanisa amayeza e-ADHD kunye notywala?
Ngaba kukhuselekile ukuthatha amayeza eAdderall kunye ne-ADHD ngotywala? Iingcali zithi mhlawumbi akunjalo kodwa kukho ezinye izinto onokuzijonga ngaphambi kokuba usele.
Kwenzeka ntoni ngaphakathi komzimba wakho xa usela amayeza?
Lihamba njani ichiza lisuka ku-A (ukufunxwa) liye ku-E (ukukhutshwa)? Sacela iingcali ukuba zichaze inkqubo emzimbeni wakho emva kokuba uthathe amayeza.
Idosi embi, iifom, kunye namandla
Umgangatho oqhelekileyo we-Advil yomkhuhlane okanye iintlungu ezincinci kunye neentlungu ngama-200 mg. Sebenzisa itshathi yethamo lethu le-Advil ukufumana isilinganiselo esinconywayo kunye nesona siphezulu se-Advil.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeAlbuterol kunye nendlela yokuzikhusela
Uvalo, ukungcangcazela, kunye nomqala obuhlungu zezinye iziphumo ebezingalindelekanga ze-albuterol. Thelekisa iziphumo eziqhelekileyo kunye nezibi ze-albuterol kwaye ufunde indlela yokuziphepha.
Utywala kunye ne-asthma: Ngaba ndingasela ngelixa ndisebenzisa i-albuterol okanye i-Singulair?
Kukho iziphumo ezixubeneyo malunga nokhuseleko lokusela utywala ukuba une-asthma. Kodwa nantsi into esiyaziyo ngokudibanisa utywala kunye ne-asthma meds.
Ngaba kukhuselekile ukusela utywala ngelixa uthatha iipilisi zokulawula inzala?
Ayenzi njalo, ukuba nje usela ngokufanelekileyo. Ungasivumeli eso sidenge kodwa. Ulawulo lokuzalwa kunye notywala ngumxube onobungozi xa uzinkcinkca ngotywala.
Ngaba ndingasela ukuba ndikwiCelebrex okanye iMeloxicam?
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-GI zinokwenzeka nangaliphi na ixesha ngelixa uthatha ii-NSAID, kodwa ukudibanisa utywala kunye ne-arthritis meds kunokunyusa umngcipheko. Funda ngobungozi apha.
Iziyobisi ezili-10 akufuneki uzixube notywala
Kukho amakhulu otywala kunye nonxibelelwano. Nazi i-10 ezinokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezimandla njengokuphuma ngaphakathi okanye iingxaki zentliziyo.
Utywala kunye nesicaphucaphu amayeza: Ngaba ndingadibanisa iDramamine kunye notywala?
Ukuxuba iDramamine kunye notywala kunokuqinisa iziphumo ebezingalindelekanga njengokozela. Cinga ngeziphumo ebezingalindelekanga ngaphambi kokuba usele kunyango lokugula.
Kwenzeka ntoni xa uxuba i-Ambien kunye notywala?
I-Ambien kunye notywala ayisiyondibaniso ekhuselekileyo. Iziphumo zokuxuba utywala, i-Ambien, okanye ezinye izixhobo zokulala zingakhokelela ekurhoxiseni nasekufeni.
Iziphumo ebezingalindelekanga kunye nendlela yokuzikhusela
Intloko, ukozela, kunye nentlungu yomsipha zezinye iziphumo ebezingalindelekanga ezinokwenzeka ngelixa uhlengahlengisa amayeza. Apha kulapho kuya kufuneka ubone ugqirha.
I-Angiotensin II receptor blockers (ARBs): Ukusetyenziswa, iimveliso eziqhelekileyo kunye nolwazi lokhuseleko
I-Angiotensin II receptor blockers (ARBs) inyanga uxinzelelo lwegazi kunye neemeko zeethambo. Funda ngakumbi malunga neentlobo kunye nokhuseleko lweeARBs apha.
ndingenza ntoni ukuyeka ukuqhina
indlela echaphazela ngayo intsasa emva kwepilisi
iingozi ekusebenziseni i-albuterol inhaler ephelelwe lixesha
ungathenga i-flexeril phezu kwekhawuntari
likhona ichiza elenza lafana nalawo aveliswe ngumenzi ngaphambi komtshato
Ixabisa malini i-accutane ngaphandle kweinshurensi